Plasma vs Dekadda, kooxdee gaari doonta Final-ka Janaraal Da’uud ee Kubadda Kolayga? Ha Moogaan 7 Laacib oo Dekadda ka tirsanaa ayaa maanta kasoo Horjeeda!! – Gooldhalin
Horyaallada Somalia WARARKA
Plasma vs Dekadda, kooxdee gaari doonta Final-ka Janaraal Da’uud ee Kubadda Kolayga? Ha Moogaan 7 Laacib oo Dekadda ka tirsanaa ayaa maanta kasoo Horjeeda!!
Muuse Abdi April 5, 2018	No Comments
Kulanka loogu gudbayo Finalka Koobka Janaraal Daa’uud ee Kubadda Kolayga ayaa maanta waxaa foodda isku dari doona kooxaha Muruq Weynta ah ee Plasma iyo Dekadda, waxaana uu ka dhici doonaa Garoonka Wiish ee Degmada Cabdicasiis.
Kooxda Plasma ayaa waxay kasoo Gudubtay Guruubka B, Halka Dekadda ay kasoo Gudubtay Guruubka A, iyadoo labada Naadiba ay sanadkan soo bandhigeen hannaan ciyaareed oo aad loo jecleystay.
Kooxda Heegan ayaa Koobkan heysata, in kastoo Sanadkan ciyaaraha sida muuqata aysan kooxuhu ku kala Awood yareyn.
Waxyaabaha aad la yaabi karto.
Xiddigo badan oo ka tirsanaa kooxda Dekadda ayaa maanta wajahaya naadigoodii hore, iyagoo ku lebisan Funaanadda kooxda Plasma, waxaana kuwaas ku jira laacibka Caanka ah ee dhinaca kubadda Kolayga Mandeella, kaasoo 10-sano wax ka badan ka tirsanaa Dekadda.
Sanadkii hore xiddigaha kooxda Dekadda u ciyaarayay ee maanta ka hortegaya kooxdoodii hore waxay gaarayaan 7 Ciyaartoy, waana kuwa Isbeddelka dhinaca Wanaagsan ah u horseeday kooxda Plasma oo Sanadkan ka mid ah Naadiyada loo saadaalin karo hanashada Koobka Janaraal Daa’uud ee Kubadda Kolayga Dalka.
Kooxaha ugu xoogga badan Koobkan ee Heegan iyo Horseed oo Ciidanka Booliska iyo Meletariga kala metela ayaa waxay yihiin kooxaha kale ee Semi-finalka Janaraal Da’uud Sanadkan xaadirka ku ah, waxayna Foodda is dari doonaan Sabtiga.
Ciyaarta Finalka ayaana u dhexeyn doonta Labadaan kulanka Labada kooxood ee kasoo Baxa, waana Sanad kale oo bandhig fiican laga Bartay koobka Kubadda Kolayga ee Janaraal Da’uud.
Kulanka: Plasma vs Dekadda
Garoonka: Wiish Court
Saacadda: 04:00pm Galabnimo Waqtiga Geeska Afrika
Previous Previous post: Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday wixii uu Mohamed Salah ka yiri dhaawiciisa ka dib guushii city
Next Next post: Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Monaco Fabinho oo doonaya inuu ku biiro Manchester United